ဘုရားဂုဏ်တော် ဆယ်ပါး | မေတ္တာရိပ်
← အလိမ်ခံရခြင်း အကြောင်းရင်းများ
ဗုဒ္ဓေါ နုဿတိဘာဝနာ →
ဘုရားဂုဏ်တော် ဆယ်ပါး	Posted on July 5, 2009	by mettayate ဘုရားဂုဏ်တော်ကိုးပါကို ဆယ်ပါး (ပါရာဇိကဏ်အဋ္ဌကထာ နှင့် ၀ိသုဒ္ဓိမဂ်အဋ္ဌကထာများတွင် ဘုရားဂုဏ်တော်ကို ဆယ်ပါးဖွင့်ပြသည်။
အရဟံ = လူနတ် ဗြဟ္မာသတ္တ၀ါအားလုံးတို့၏ ပူဇော်အထူးကို ခံယူတော်မူထိုက်ပါပေ၏။
သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ = အလုံးတော်တရားတို့ကို ကိုယ်တိုင်မှန်စွာ သိမြင်တော်မူပါပေ၏။
၀ိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော = အသိဉာဏ်ဝိဇ္ဇာ၊ အကျင့်စရဏ နှင့် ပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏။
သုဂတော = ကောင်းသောစကားကို ဆိုတော်မူ တတ်ပါပေ၏။
လောက၀ိဒူ = သတ္တလောက၊ သြကာသလောက၊ သင်္ခါရလေက ဟု ဆိုအပ်သော လောကသုံးပါးကို သိမြင်တော်မူပါပေ၏။
အနုတ္တရော = လောကသုံးပါးတွင် အမြတ်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်မူပါပေ၏။
ပုရိသဒမ္မသာရထိ = ဆုံးမထိုက်သူကို အောင်မြင်စွာ ဆုံးမတော်မူတတ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ထူးဖြစ်တော်မူပါပေ၏။
သတ္ထာဒေ၀မနုဿာနံ = လူနတ်ဗြဟ္မာ သတ္တ၀ါအားလုံးတို့၏ ဆရာ ဖြစ်တော်မူပါပေ၏။
ဗုဒ္ဓေါ = သစ္စာလေးပါးတရားကို သိမြင်တော်မူပါပေ၏။
ဘဂ၀ါ = ဣဿရိယ၊ ဓမ္မ ယသ၊ သိရီ၊ ကာမ၊ ပယတ္တ တည်းဟူသော ဘုန်းတော်ခြောက်ပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏။
အညွှန်း။ အရှူံးမရှိသော ဒဿနစာအုပ်။ Like this:Like Loading...
This entry was posted in ပါဠိ ဘာသာပြန် and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← အလိမ်ခံရခြင်း အကြောင်းရင်းများ